[October 25, 2020 09:39:33 PM]
रहेनन् राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे ...
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ। १ सय १ वर्षको उमेरमा मंगलबार अपराह्न करिब साढे ५ बजेतिर आफ्नै निवास लैनचौरमा घिमिरेको निधन भएको उनका पारिवारिक सदस्य अशेष शर्माले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। उनी केही समयदेखि बिरामी थिए। शर्माका अनुसार घिमिरे ...
‘इटहरी काव्य पुरस्कार’ सोलुखुम्बुका साहित्यकार कट्टेललाई ...
काठमाडौं । इटहरी साहित्यिक समूह, सुनसरीले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘इटहरी काव्य पुरस्कार’ सोलुखुम्बुका साहित्यकार हरि कट्टेललाई प्रदान गरिएको छ । सोमबार इटहरीमा २०७ औं भानु जयन्तिको अवसरमा आयोजिक कार्यक्रममा सोलुखुम्बुका अग्रज प्र ...
प्रदेश सरकारले साहित्यकार डि.बी. किराँतीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने ...
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुलाई कर्मथलो बनाएका साहित्यकार डि.बी. किराँतीलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गर्ने भएको छ । सगरमाथा नाट्यकला प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेका किराँतीलाई प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय ग ...
संस्मरण : प्रिय सल्लेरी ! ...
बद्री भिखारी - रूम्जाटारको मैदानमास्तिर बर्नालुको उकाली पार गर्दै टोड्केबाट केही अगाडि पुगेपछि पहिलोपल्ट तिमीलाई देखें । तिमी त यौवनले छपक्कै मुखमुख भएकी सेतो भूइँकुइरोको खास्टोले मुहुडा छोपेर बसेकी महलकी एक सुकुमारीजस्ती पो लाग्यो । शरदको नीलो ...
कथा : रातभरि हुरी चल्यो ...
~इन्द्रबहादुर राई~ छानामा ठोकेको मट्टीतेलका टिनहरूलाई हावाले फेरि ‘खल्टाङ खुल्टाङ खट् खट् खल्टाङ खल्टाङ गर्दै एकोहोरो तौरले हल्लाउन थालेको छ । छप्परै उडाएर लैजाला भन्ने मनभित्रबाट डर लागेर आउँछ । घरभित्र छिरेको हावाले हल्लाएको ढिब्रीको धमिल ...